देउवाले जित्दैमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस सकिएको छैन : होमनाथ दाहाल
Tuesday,6Mar, 2018 12:58 PM
निर्वाचनको हारपछि पार्टीभित्र रक्षात्मक अवस्थामा पुगेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेतामा विजय भएसँगै पुनः दरिन पुगेका छन् । निर्वाचनमा पार्टी हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै नेतृत्व हस्तान्तरणका लागि भइरहेको दवाललाई उनले पन्छाउन सफल भएका छन् । काँग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्ननको लागि उठिरहेको बहस अब के हुन्छ ? धेरैको जिज्ञासाको विषय बनेको छ । संसदीय दलको नेतामा हारेपछि पार्टीको भागवण्डामा पौडेल पक्षधरको हैसियत कस्तो होला ? यो प्रश्न पनि काँग्रेसवृत्तमा उठ्न थालेको छ । सभापति देउवाको संसदीय दलको नेतामा उदयभएसँगै काँग्रेसभित्रको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला ? आन्तरिक शक्तिसन्तुलन कस्तो होला ? काँग्रेस नेता होमनाथ दाहालले न्यूजसेवासँग गरेको विश्लेषण यस्तो छ ।
देउवाको विजय स्वभाविक हो : काँग्रेसभित्र जुन किसिमको संगठनात्मक संरचना छ अहिलेको त्यसलाई हेर्दा शेरबहादुरको विजयलाई त्यति अस्वभाविक भन्न मिल्दैन । किनभने उहाँले नै टिकट दिएर जितेका मान्छेहरु सांसद भएका हुन् । समानुपातिकतर्फका सांसदहरु पनि उहाँले नै छान्नुभयो । उनीहरुकै मतले जित्ने हो । त्यसकारण जुन परिणाम आयो त्यसलाई धेरै अन्यथा भन्न मिल्दैन । जसले टिकट दिएर सांसद भइएको छ । त्यही मान्छे नै उठिसकेपछि अरुलाई जिताउनु उनीहरुको नैतिकता, मानसिकता, व्यवहारिक रुपले पनि मिलेन ।
वास्तवमा अहिलेको समस्या भनेको समग्र काँग्रेसको समस्या हो । त्यसमा अहिलेको कार्यसमितिमा बसेका साथीहरु केही न केही रुपमा जिम्मेवार छन् । पार्टी सभापतिको हैसियतमा शेरबहादुरजी अलि बढि जिम्मेवार हुनुहुन्छ । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, पार्टीको अहिले जुन खालको स्थिति सिर्जना भएको छ, त्यसमा नेता हुँ भन्ने जति सबैले जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । पार्टीभित्र पौडेल पक्षधर भनिएको छ । यो भनेको के हो ? उहाँहरुको विचार के हो ? पदीय भागवण्डामा बाहेक उहाँहरुले पार्टीलाई अगाडि बढाउन के सोच्नु भएको छ ? उहाँहरुसँग त कुनै स्पस्ट दृष्टिकोण नै छैन । जब भागवण्डाको कुरा आउँछ अनि पक्षधरता खोज्न थालिन्छ ।
नेतृत्व परिवर्ननको विषय सकिएको छैन: भाग चाहिएको थियो त्यसका लागि नेतृत्व परिवर्तनको कुरा उठेको हो भने त अब यो च्याप्टर ५ वर्षका लागि क्लोज भयो भने पनि हुन्छ । हैन, नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने अन्य पनि कारणका छन् । काँग्रेसको अवस्था यसपालीको चुनावमा किन नराम्ररी खस्कियो ? हामीले भोग्नु परेको पराजयको कारण के हो ? यि सबै कुरालाई मुल्याँँकन गर्ने हो र पार्टीलाई पहिलकै अवस्थामा लैजाने हो भने यो प्रश्न अहिले पनि सार्थक छ । हैन अब यस्तै–यस्तै भागवण्डाका विषयमा कुरा नमिलेर विवाद उठाउने । अगिपछि चुप लागेर बस्ने हो भने त्यसको सान्र्दभिकता त सिद्विहाल्यो नि ! पाँच बर्षको लागि शेरबहादुर जी संसदीय दलको नेता भइहाले । आखिरमा पराजय हुँदा सबै काँग्रेस पराजय भए । यस्तो अवस्था किन आयो त भन्ने कुरामा केन्द्रीय सदस्यहरुले गम्भीर छलफल गरेको कहीँ सुनिदैन । हामीहरुले भन्यौ सभापतिले सुन्नु भएन भनेर भन्छन् केन्द्रीय सदस्यहरु । सभापतिले सुन्ने गरेर भन्ने पनि त विधिप्रक्रिया होला त्यतापट्टि उहाँहरु कहिल्यै पनि जानुभएन ।
अब यो परिणामले को बलियो को कमजोर भन्दा पनि समग्रमा पार्टीको अवस्था के छ त्यतातिर हेर्नुपर्यो । त्यता कोही पनि साथीहरु गम्भीरताका साथ नजाने अनि आफ्नो–आफ्नो ग्रुप बनाएर एउटा घटनामा प्रतिक्रिया जनाएर आफ्नो अस्तित्व देखाउने । यसरी काम चल्दैन । अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरी काँग्रेसभित्र शेरबहादुरजी शक्तिशाली हुनुभयो । संसदीय दलको नेता अनि पार्टी सभापति उहाँ नै हुनुभयो । तर, त्यतिले मात्र काँग्रेस चल्दैन । काँग्रेसको लागि यो पाँच बर्ष मात्रै होइन होला ! त्योभन्दा पर गएर हेर्न सक्नुपर्यो । कम्युनिष्टहरुको एकछत्र राज्य चलिरहेको छ । त्यसको बारेमा काँग्रेसको एकीकृत धारणा के हो ? त्यो कुरा त आउनु प¥यो नि । त्यसमा काम गर्न जो साथीहरुले नेतृत्वको दाबी गरिरहनु भएको छ उहाँहरुले सामुहिक रणनीति बनाउन पर्यो ।
देउवाले पेल्नु हुँदैन : प्रजातान्त्रिक पार्टीमा एकलौटी निर्णय गर्ने कुरा हुँदैन । हिजो वीपीको पक्षका के थिएन तर, उहाँले एकलौटी निर्णय त गर्नु भएन । किसुनजीले के भन्नुहोला । गणेशमानजीले के भन्नुहुन्छ । अरु साथीहरुको राय के छ, बुझेर मात्र निर्णय गर्नुहुन्थ्यो । त्यसैले प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ भने एकलौटी निर्णय गर्ने भन्ने कुरै हुँदैन । मुलुक संघीयतामा गयो अहिले देशकै पुनःसरचना भएको छ । पार्टीलाई पनि संघीयताको नयाँ संरचना अनुसार अगाडि बढाउन पर्यो । यसपाली चुनावको परिणाम किन यस्तो आयो । छलफल त यसमा हुनपर्यो । भोलि उपसभापति बनाउनु होला सभापतिले यो ठिक भएन भनेर अर्को पक्षले विरोध जनाउने । कार्यसमिति थप्ने कुरामा विरोध जनाउने । विरोधलाई म अनुचित भन्दिन गर्नुपर्छ होला त्यहाँ बसेर । सभापतिले राखेको पात्र ठिक नहुन पनि सक्छ । तर, त्यतिले मात्र काँग्रेससामु र लोकतन्त्रमाथि आएको चुनौतीको सामना गर्न सकिदैन । कम्युनिष्टले कस्तो शासन गर्छन चनाखो भएर हेर्नुपर्ने छ । प्रतिपक्षमा रहेको काँग्रेस गाउँदेखि केन्द्रसम्म तयारी हालतमा बस्नुप¥यो । काँग्रेस त आखिर गाँउमा पनि छ ।
शशांकले भूमिका खेल्न सकेनन् : महामन्त्रीको हैसियतले उहाँले के जिम्मेवारी पुरा गर्नुभयो ? आज सभापति मात्रै हो र काँग्रेसभित्रको संकटको यो पात्र । सभापतिले आफ्नो मनपरी गरे होलान । तर, सभापतिलाई जुन कार्यकर्ताले भोट दिए त्यही कार्यकर्ताले महामन्त्रीलाई भोट दिएको हैन ? उहाँको के भूमिका रह्यो हिजोका दिनमा ? अहिलेको काँग्रेसको राजनीतिमा महामन्त्रीको हैसियतले उहाँले कहिल्यै आफ्नो कुनै विषयमा प्रवेश नै गराउन सक्नुभएन । उहाँका क्रियाकलापहरु महामन्त्रीका हिसाबले उपयुक्त छैनन् । पहिला पनि सांसद हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि सांसद हुनुहुन्छ । उहाँले संसदमा कुनै विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाउनु भएको छैन । बाहिर मिडियामा कुनै किसिमको विचार आएको छैन । महामन्त्री जस्तो मान्छेले यस्तो गम्भीर कुरा उठाउनुभयो भनेर कसैले छलफल गरेको मैले सुनेको छैन । महामन्त्री हो आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्नु भएको होला तर काँग्रेसको यो संकटलाई निकास दिन त उहाँको कुनै भूमिका देखिँदैन ।